Thwebula Kingo ROOT 1.5.6.3234 – Windows – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: Kingo ROOT
I-Wikipedia: Kingo ROOT
Kingo izimpande – a isofthiwe ukuthola ukufinyelela Superuser kumadivayisi Android. Isofthiwe isekela amadivaysi eziningi ezivela abakhiqizi eziholela futhi izinguqulo ezahlukene uhlelo lokusebenza Android. Kingo izimpande ikhomba idivayisi exhunyiwe futhi ngokuzenzakalelayo ukufakwa umshayeli efanele model ethile idivayisi. umshayeli Umi unikeza umsebenzisi i ukufinyelela izilungiselelo eziphambili idivayisi, ikhono ukufaka izicelo ne ukufinyelela kanye namalungelo ukuphatha uhlelo noma amafayela esikhashana. Kingo izimpande has a esibonakalayo elula futhi kulula ukuyisebenzisa.
Automatic impande lungiselelo
Ukusekela Amadivayisi amaningi kusuka abakhiqizi ezahlukene
Ukuxoxa izinguqulo ezehlukene Android
Thwebula Kingo ROOT
Amazwana ku Kingo ROOT
Kingo ROOT software ehlobene
I-CuteDJ – isitudiyo se-Dj ukudala izingoma zomculo futhi zixube ngamathuluzi ahlukahlukene. Isoftware iqinisekisa ikhwalithi yokuphinda ikhiqizwe ngezindlela ezahlukene zomsindo.
Isofthiwe ukwakha server abezindaba ephelele. Isofthiwe isekela ukungena kokukude amafayela emidiya kusuka kukhompyutha kanye namadivayisi ezahlukene.
I-Auslogics Anti-Malware – ithuluzi elihambisana ne-software ukuvikela ikhompyutha yakho futhi likuvumela ukuthi ukwazi ukuthola nokususa isoftware enonya noma amanye amafayela asolisayo.